Imaaradka Carabta iyo Sacuudiga oo diyaariyay qorshe lagu wiiqayo awooda Turkiga ee gobalka – Bandhiga
Imaaradka Carabta iyo Sacuudiga oo diyaariyay qorshe lagu wiiqayo awooda Turkiga ee gobalka
Wargeyska Middle East Eye ee British-ka ah ayaa sheegay inuu heley qoraal ay leedahay wakaalad Imaaraati ah oo sheegaya in Sucuudigu uu diyaariyey isla markaana uu ku dhaqaaqay inuu fuliyo qorshe istiraatiijiyadeed oo lagu doonayo in lagu carqaladeeyo saameynta Turkey ku leedahay gobolka iyo in la rido dowladda madaxweyne Rajap Dayyip Erdogan.
Waxaa waregeyska uu sheegay in warbixin qarsoodi ah oo uu soo saaray Xarunta Siyaasadda ee Imaaraatka, oo xiriir dhow la leh sirdoonka Abu Dhabi, ayaa lagu sheegay in Sucuudigu uu bilaabay fulinta qorshahan kadib dilkii loo gaystay wariye Jamaal Khaashuqjii.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogan inuu “aad ugu fogaaday ololihiisa uu kaga soo horjeedo boqortooyada, si gaar ah shaqsi ahaan dhaxal sugaha”sababo la xiriira arrintii dilkii Khaashuqji.
Sida warbixintan lagu sheegay,waxa uu “Erdogan uu ku guul darreystay isku daygiisii ​​ahaa inuu caalami ka dhigo arrinta khaashuqji, waxaa la joogaa wakhtigii loo jawaabi lahaa”.
Waxa warbixinta ay cadaysay in ujeedadada qorshan Sucuudiga uu ahaa in la adeegsanayo wax walba oo suurtagal ah si cadaadis loo saaro xukuumadda Erdogan loona tabardareeyo, isla markaana ay ku mashquuliyaan dhibaatooyin gudaha si loogu riixo inuu ku kaco khaladaad, iyadoo la rajeynayo in mucaaradka uu ku guuleystaan ​​inay ridaan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay caddayntii ugu horreysay ee qorshahan Sucuudiga iney soo baxday markii talisku uu diiday in 80 baabuurta kuwa xamuulka qaada ah oo siday waxyaabo kimika ah oo Turkey ay leedahay inay soo galaan dekedda Daba.
Wargeyska ayaa intaa ku daray, isagoo kasoo xiganaya ilo Turkish ah, in mas’uuliyiinta Sucuudiga ay ka hor istaageen 300 container oo Turkish oo sidday khudaar iyo miro inay kasoo galaan dekedda Jeddah, iyadoo la ogyahay in tirada dadka dalxiisayaasha Sucuudiga ee Turkey booqanaya ay hoos udhaceen 15% boqolkiib qeybtii hore ee sanadkan 2019.